BARADHADA HILLING: SIDA UGU HABOON EE LOO BEERAY BARADHADA MARKII UGU HOREYSAY - BARADHADA
Xeerarka loogu talagalay barandhada: marka la barbar dhigo baradhada markii ugu horeysay
Baradhadu waa raaxo jecel dad badan. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa si sax ah u garanaya sida si fiican loo koro si loo helo dhalidda ugu sareysa. Bannaanka waaya-aragnimada ah ayaa fahamsan muhiimada shaqo ee noocan ah, kuwa cusubna waxay xiiseynayaan sababta bataatada iyo sida loo sameeyo si sax ah. Xaqiiqdii, muhiimada nidaamkan waa mid aad u weyn, tan iyo markaa kadib waxaad heli kartaa natiijo wanaagsan.
Ma taqaanaa? Baradhadu - khudradda ugu horeysa ee caleenta ah, kaas oo la koray 1995-kii eber eber. Tani waxay sameeyeen cosmonauts American oo ku yaala xarunta Columbia.
Waa maxay habka loogu talagalay?
Hilling - Habka beereedka, oo ka kooban xajin yar oo qoyan qoyan si qaybta hoose ee baadiyaha. Tani waxay ka caawin doontaa soo bixitaanka xididdada dheeraadka ah iyo digriiga, kordhinta wax soo saarka, iyo sidoo kale caawinta ilaalinta qoyaanka.
Intaa waxaa dheer, hilling waxay u horseedaa dheellitirka dheeraadka ah ee dhulka iyo dabacsanaanta leh oksijiinka. Beeralayda ayaa og in waqti ka dib, baradhadu u koraan qiyaasta iyo kor u kacda dhulka dushiisa, iyo dhulka, dusha sare ee dusha sare ee hills, waxay ilaalin doonaan digriiga qorraxda kulul iyo xaaladaha kale ee xun.
Sida loo shiilo baradho
Marka hilling aan la tuuri karin, waxaa muhiim ah in si sax ah loo sameeyo. Shaqada waa in lagu fuliyaa hawada qumman ee subaxda ama fiidkii, iyo ciidda waa inay qoyaan.
Waa muhiim! Si looga hortago dhaxan guga lama filaan ah, iyo sidoo kale jaridda dhirta iyo dabacsanaanta ciidda, hilling hore hore waa lagama maarmaan. Tani waa in la tixgeliyaa haddii aad rabto inaad hesho dhalidda ugu sarreysa.
Celcelis ahaan, dhammaan bannaanka u qaataan ugu yaraan laba hilling inta lagu jiro xilli. Si kastaba ha ahaatee, muddada u dhaxaysa waa 21 maalmood, si kastaba ha ahaatee, habka waa in loola socdo kiis kasta, sababtoo ah mid ka mid ah khudaarta ayaa ku kora sida ku qoran tilmaamaha. Mararka qaarkood tirada nidaamka ayaa gaaraya 4 jeer.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa ee lagu bilaabo beeritaanka baradho waa Hindi oo ku noolaa dhulkii casriga ahaa ee Peru 4 kun oo sano ka hor. Xitaa markaa, waxay daadiyeen qiyaastii 200 noocyo asalkoodu yahay.
Waqtiga ugu horeeya ee hilling
Bannaanka uurjiifka badan ayaa xiiseynaya marka barafka la shiilayo markii ugu horeysay. Dadka degaanka xagaaga, oo markii ugu horeysay abuuray dalagyada caleemaha sida ugu horeysa, ogow in markii ugu horeysay ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo shaqooyinka noocaas ah marka geedo ay soo baxeen oo kaliya. Nidaamku wuxuu ka kooban yahay si buuxda u buuxinta dhirta dhalinyarada leh dhulka.
Si loola dagaallamo cayayaanka, cudurrada iyo cawska on baradho caawin doonaa daroogada: Bitoksibatsillin, Taboo, Lazurit, Prestige, Quadris.
Qarsoodigu waa xaqiiqda ah in macaamilada noocan ahi ay u oggolaan doonaan xididada inay hagaajiyaan kobcintooda ayna soo saaraan habab dheeraad ah. Haddii hurdadani aysan dhicin, ka dibna hoyga buuxa ee soo socda ayaa la sameeyaa marka caleemaha koraan ugu yaraan 14 cm.
Markaad ku soo celiso soo dhaweynta agrotechnik
Marka la ogaado goorta iyo sida si habboon loogu beeray baradhada markii ugu horeysay, waxaa muhiim ah in aan la seegin waqtiga dib loo shaqeynayo.
Cayayaanka ugu weyn ee baradho waa baradho baradho ah Colorado. Waxaad ula dagaalami kartaa oo kaliya ma leh cayayaanka, laakiin sidoo kale leh hababka dhaqameed (khal iyo khardal).
Waqtiga ugu fiican ee tan waa marka caleemaha ay koraan 30 cm. Waa muhiim in laga saaro cayayaanka oo dhan ka hor inta aan la samaynin shaqooyinkaas.
Waa muhiim! Marka ubaxyadu u muuqdaan caleemaha, shaqo kasta waa in la sameeyaa si taxadar leh, sida waqtigaan digriiga bilaabay in la xirxiray. Ficil kasta oo taxaddar la'aan ah ayaa waxyeeleyn kara.
Mar walba lagama maarmaan maaha in la fuliyo nidaamka
Meelaha ay heerkulka carrada u kici karaan +26 digrii oo aysan jirin suurtagal ah in si joogta ah loo waraabiyo geedo, waxaa lagu talinayaa in laga ilaaliyo hilling. Ma jirto baahi loo qabo in la fuliyo tallaabooyinka la midka ah marka beeritaanka baradhada hoostiisa qotomada madow.
Ka dib markaad akhrisid maqaalkan, qof kastaa wuu fahmi karaa in uu ku bislaado baradho ama aan ahayn, iyo tan ugu muhiimsan, marka arrintaan la sameynayo, sidaa darteed dadaal kasta oo aan waxba tarayn.